ခရီးသွား လုံခြုံရေး နှင် ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ခရီးသွား လုံခြုံရေး နှင် ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ
ခရီးသွား လုံခြုံရေး နှင် ့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ
Posted by ေမာင္ရိုး on Feb 19, 2013 in Creative Writing, Myanma News | 27 comments
လွန်ခဲ ့တဲ ့ရက်ပိုင်းက ဖတ်ခဲ့ရတဲ ့အမြန်လမ်းက သတင်းကိုအကြောင်းပြုရင်း ဒီပို ့စ်ကိုရေးမိတာပါ ။
မူရင်းသတင်းကိုလည်း ခွင် ့တောင်းပြီး အောက်မှာကူးတင်ပေးထားပါတယ် ။ အမြန်လမ်း ကသိတဲ့အတိုင်းပဲ
ပဲခူးရိုးမတောင်ခြေနားက ကပ်ပြီး ဖေါက်ထားတာဖြစ်တဲ ့အတွက် ပုံမှန်အားဖြင့်လူနေမြို ့ရွာများနဲ ့
ဝေးပါတယ် ။ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုဖြစ်ရင် အကူအညီ မလွယ်သလို လုံခြုံရေးလည်း မကောင်းလှပါဘူး။
သိပ်မကြာခင်က ကြားမိသေးတယ် ….. ညဖက် အမြန်လမ်းပေါ်မှာ တုံး တစ်ချို ့တားပြီးလက်ဆော ့ထားတာ ။
ဒါနဲ့တွေ ့ကာစက ဓားပြ တိုက်တာလားလို့လန် သွားပေမဲ့ကိုယ်တိုင် အမြန်ဆင်းဖယ်ပြီး မောင်းခဲ ့ရတယ်
လို ့ဆိုပါတယ် ။ခုလည်း ခရီးသည်တင်ကားကို ခဲ နဲ့ပေါက်ပြန်သတဲ့။ ကားလေကာမှန် ကိုထိပေလို ့ပေါ့။
တံခါး ဖွင် ့ထားစဉ်မှာ အထဲကလူကိုမှန်ရင်ဖြင့်သေနိုင်တဲ ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ် ။ကားတွေက ကီလို
၁၀ဝ နှုံးအနဲဆုံးမောင်းနေတာပါ ။ အဲဒီအရှိန်နဲ ့ဆို စဉ်းစားသာကြည် ့ပါတော့။
မောင်ဆာမိ မောင်းတဲ ့ကားလည်း လွန်ခဲ ့တဲ ့ဆယ်စုနှစ်ကျော်ကျော်က ဇယျဝတီ မြို ့နားမှာ
ခဲနဲ ့ပေါက်တာခံခဲ ့ရဖူးပါတယ် ။ ဒါနဲ့သက်ဆိုင်ရာ ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့် ခဲ ့တယ်ဆိုပါတော့။
နောက်ခြောက်လ လောက်မှာ ဖမ်းမိပါတယ် ။ လူငယ်လေးတွေပါ ။ အရက်မူးပြီး ရည်ရွယ်ချက်မရှိ
လက်ဆော ့လိုက်တာ ကံကောင်းလို့ကားမှန်သာကွဲခဲ ့ပါတယ် ။။ အထဲက ထိုင်နေတဲ့သားအဖနှစ်ယောက်
ကိုမထိခိုက်လိုက်တာပဲ တော်လှပါပြီ။ ကျနော် အမှုကိုထပ်ပြီး ရေမလောင်းခဲ ့ပေမဲ့သူတို ့
ထောင်ကျသွားပါတယ် ။ နောက်တစ်ကြီမ်က မောင်ဆာမိတို့ကားအုပ်စုထဲက စပယ်ယာပါ ။သူလည်း
တစ်ခါတုန်းက မူးပြီး ရထားကို ခဲနဲ ့ပေါက်ခဲ ့ပါတယ် ။ သက်ဆိုင်ရာက မရမကရှာဖွေဖေါ်ထုတ်ပြီး သူ ့ကို
ထောင် ၃ နှစ် ချပါတယ် ။
ကျနော်ဆိုလိုတာက ရထားနဲ့မော်တော်ကားကို ခဲနဲ ့ပေါက်သူကို ဥပဒေအရ အရေးယူခဲ ့ဖူးတယ်လို ့
ပြောချင်တာပါ။ ခုလည်း လူမနီး သူမနီး ဖြတ်သွားရတဲ ့အမြန်လမ်းမှာ လုံခြုံရေးကောင်းမွန်ဖို ့ဆောင်ရွက်သင် ့
ပါတယ် ။ အနည်းဆုံး မိုင်သုံးဆယ် တိုင်းမှာ ရဲကင်းတစ်ခုစီထားပြီး ကိုယ့်တာဝန်ယူရာဒေသကိုရှင်းလင်းထားပြီး
လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ရင် ခရီးသွားသူများအတွက် စိတ်ချရမယ်ထင်ပါတယ် ။ ခရီးသည်တင်ကားတွေဆိုတာ
အများစုက ညဖက်မောင်းကြရတာပါ ။ဒီလိုသာ ခြုံပုတ်စုစုမြင်တိုင်း ဘယ်နေရာက ခဲနဲ ့ပေါက်မလဲ ဒါမှမဟုတ်
လေးဂွ နဲ ့များပစ်လေမလားလို့တွေးကြောက်နေရရင် ခရီးထွက်ဖို ့တောင် ဝန်လေးနေမိမှာပါ ။
အခုချိန်မှာ နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်များလည်းအလုံးအရင်းလာရောက်လည်ပတ်ကြတာမို့ဒီလို ခဲတစ်ချက်သာ
ပေါက်တာခံရရင် နဂိုကတည်းကနာမည်ကောင်းမရဖြစ်နေတာ ထပ်ပြီး အပြောအဆိုခံရနိုင်ပါတယ် ။ဒီနေရာမှာ
စည်းကမ်းမရှိတာတို့ပညာမဲ ့တာတို ့ကိုပြုပြင်ဖို ့ကကြာပါဦးမယ် ။လတ်တလော ဥပဒေအရသာအမြန်အရေး
ယူဆောင်ရွက်ပြီး တတ်နိုင်သမျှလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်ဖို ့ပါပဲ ။ဒီတော့ကျနော်တို ့ရဲ ့သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများ
အနေနဲ ့လည်း တစ်ချက်လေးစောင်းငဲ ့ကြည် ့ကြပါဦး လို့ပြောပါရစေ ။ တစ်လုပ်ရင် တစ်ကယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။
တစ်ကယ်လုပ်ဖို့ပဲလိုတာပါ ။ တွေးမိတာလေးတစ်ခုက ကျနော်တို ့ပြောနေတဲ ့လူ ့အခွင် ့ရေးဆိုတာ သာမန်
ပြည်သူတွေအတွက်မဟုတ်ပဲ တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေဖက်ကိုများ ချိန်ခွင်လျှာ
စောင်းလေရော ့သလား ……….. လို ့
ဟိုအရင်ကတော့ ရထားတွေကို ခဲနဲ့ပစ်တာ ကားဖူးပါတယ်။ြ အခု ခဲနဲ့အပစ်ခံရတဲ့ထဲမှာ အဝေးပြေး ခရီးသည်တင်ကားတွေ ပါလာပါပြီ။ ခဲပေါက်ခံရတာကို မကြာခဏ ဆိုသလို ကုံနေရတယ် လို့ အဝေးပြေး မော်တော်ယာဉ်လိုြ င်း တခုက ဆိုပါတယ်။ ၁၂-၂-၂၀၁၃ (ပြည်ထောင်စု)နေ့က ရန်ကုန်မြို့ကနေ နေပြည်တော်ကို သွားတဲ့ JJ Express အဆင့်မြင့် ယာဉ်လိုင်းကယာဉ်အမှတ်
၆ဂ/၄၀၈၈ ခဲပေါက်ခံရတာပါ။ နေ့လယ် ၁၂းဝဝ နာရီက ထွက်လာတာ ၂း၃ဝ အချိန် မှာပါ တဲ့။ မိုင်တိုင်အမှတ် ၉၀/၆ အရောက်မှာ လမ်းဘေးကနေ လူတဦး လောက်လေးခွနဲ့ ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ လေကာမှန်ကို ထိတယ်၊ မှန်စတွေလည်း ကားမောင်းသမားကို
ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ခဲမှန်ခံရတဲ့ကား ကျွန်တော်တို့ ကားကို ခဏရပ်ပြီး“ ခရီးသည်တချို့နဲ့ ပစ်တဲ့လူကိုဆင်း ရှာကြသေးတယ်၊ တောထဲ ဝင်ပြေးသွားတယ်၊ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆက်မလိုက်တော့ဘဲ ၁၁၅ မိုင် ယာဉ်ရပ်နားစခန်းကလုံခြုံရေးတွေကိ အကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ ဒီလို အပစ်ခံရတာ ကျွန်တော်တို့ယာဉ်လိုင်း တခုတည်း မဟုတ်ဘူး၊ တခြား ယာဉ်လိုင်းတွေလည်း အပစ်ခံနေရတယ်” လို့ JJ
Express တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောပါတယ်။ ကားပေါ်မှာလိုက်ပါတဲ့ခရီးသည်တွေကလည်း
ဒီလိုမျိုးတွေ ဆက်ဖြစ်မှာကို စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယာဉ်လိုင်းတချို ကအာဏာပိုင်တို့ကို အကြောင်းကြားခဲ့ကြပေမဲ့ ဒီနေ့အချိန် ထိ ထိရောက်တဲ့ အရေးယူမှုတွေ
မတွေ့ရသေးဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ခရီးသည် တဦးကတော့ သာမန်ခရီးသွားတွေ ဘာဖြစ်ဖြစ်“ ဂရုမစိုက်တော့ဘူးလား၊ အကောင်ကြီးကြီးရ ဆွေမျိုးတွေ၊ သားသမီးတွေ ထိတော့မှပဲ့ ”အရေးယူတော့မှာလား
လို့ ဝေဖန်ပြောဆိုပါတယ်။ ရှည်လျားတဲ့ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးတလျှောက်၊ ရထားလမ်းတလျှောက် ခဲနဲ့ပေါက်သူတွေကို ခြေရာခံဖို့ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့
မဟုတ်ပါဘူး။ တခြားနိုင်ငံတွေမှာရော ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေ
?ရှိသလား၊ ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြသလဲ ခဲပေါက်သူ၊ လောက်လေးခွပစ်သူတွေဟာ ဘယ်လိုလူတွေလဲ။ သူတို့နဲ့ ရထား၊
ကားတွေကြားမှာ ဘာများ ရန်စ ရှိထားလို့လဲ။ မန်မာပြည် ရထားလမ်း၊ ကားလမ်းဘြေး စ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်သလို ဖြစ်နေတဲ့ှန ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ နှစ်အတန်ကြာ
အချိန်ယူရဦးမယ်လု့ိ ထင်ပါတယ်။ စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူမှုများအပြင် တခြား နည်းလမ်းတွေနဲ့လည်း ပူးပေါင်း ့ိ ဖြေရှင်းကြရမယ်၊ အချိန်ယူ လုပ်ဆောင်ရမယ်လု ယူဆပါတယ်။ 2013 Feb 16ACM Re-post
ဟုတ်ဒယ် … ဟုတ်ဒယ် …
ဘိုးဘိုးဆာ ပြောသလို လုပ်သင့်တယ် …
လွှတ်တော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စော်ကားမှု (အထင်) အတွက်
ဒေါက်တာဆိတ်ဖွား ရှာပုံတော် ဖွင့်သလို …
နိုင်ငံတော် ဂုဏ်သိက္ခာ ညစ်နွမ်းစေနိုင်မယ့်
ခုလို ကိစ္စမျိုးကိုလည်း အရေးတယူ ဆောင်ရွက်သင့်တယ် …
အဲ့လိုမှ မလုပ်ဘူး ဆိုရင်ဒေါ့ …
ဘိုးဘိုးဆာ က ကျားနဲ့ တိုက်လိမ့်မယ် … ဟဲ ဟဲ …
ဟဲ့သောက်ပလုတ်တုတ်
နေရင်းထိုင်ရင်း ကျားစီးတဲ့ဘိုးဘိုး ဖြစ်သွားပါရော ့လား
တော်တော်ကြာ သမီးရီးစားအဆင်မပြေတာတွေတိုင်တည်နေမှဖြင် ့….
ကိုင်း ရှိစေတော့….
ကျုပ်သာဘိုးဘိုးဖြစ်လို ့ကတော့အဲဒီလို ဂဲနဲ ့ပေါက်တဲ ့သူတွေကို
ကောင်းကောင်း ဆုံးမပြမယ် ဟေ ့
ကျွန်တော်ကြားဖူးတာက အမြန်လမ်းမတွေကို စည်းရိုးကာထားရပါတယ်။
နေပြည်တော်ကနေ မန္တလေးဘက်အထွက်မှာတော့ စည်းရိုးတွေကာနေတာတော့တွေ့ပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါပဲ ညက ဆရာတော်ဥူးသုမင်္ဂလ စင်္ကာပူမှာ တရားဟောတာကို
နာခဲ့ရပါတယ်။ အဓိက ကတော့ စည်းကမ်းရှိဖို့ပါပဲ။ နာဖူးတဲ့သူရှိရင်လဲသိမှာပါ။
– ကိုယ်လူမျိုးနဲ့ ကိုးကိုယ်တဲ့ဘာသာ။
– ကိုယ့်ကိုမွေးတဲ့ မိခင်/ဖခင်။
………….. စသည့်ဖြင့်ပေါ့ ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်သူအားလုံးကိုလဲ ထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းပါ။
ရဲ ကင်းဘယ်လောက် စောင့်စောင့်လူတွေရဲ့အကျင့်စာရိတ္တမပြောင်းနိုင်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရပါဘူး ( ကျယ်ကျယ် ကြီးကြီးပြောတာ) :hee:
ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက အမြန်လမ်းပေါ်ရောက်ခဲ့ပါတယ် .. အသွားကော အပြန်ကောမှာပါ ရဲဝန်ထမ်းတွေ ချထားတာ တွေ့ခဲ့ပါတယ် ။ မော်တော်ပီကယ် ရဲ လည်း တွေ့ခဲ့ ပါတယ် ။
အဲ လူကြီး လမ်းကြောင်းရှိလို့ဆိုရင်တော့ သိဘူးနော် …
အထူး သဖြင့် အပြန်လမ်းမှာ ရဲတွေက အထူး သတိ ပုံစံလိုမျိုး တွေ့ခဲ့တော့ လူကြီးလမ်းကြောင်းရှိလို့ လို ယူဆမိပါတယ် ။။ ဘယ်လိုဘဲ ပြောပြော ရဲ ဝန်ထမ်းအင်အား နဲ့လည်း မလောက် ပါဘူး ..
ပစ်တဲ့ သူတွေ က ကလေး တွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. နောက် အစာ မကြေသူများပေါ့ ..
အမြန်လမ်းပေါ်မှာ မလျှောက်ရ ။ စက်ဘီး မစီးရ ။ ထော်လာဂျီမတက်ရ ။ မော်တော်ဆိုင်ကယ် မစီးရ ။ နွား လှည်း မမောင်းရ စသည်စသည် တို့ဟာ ဘာကြောင့် ဆိုတာ က နားလည် သဘော မပေါက် နိုင်တော့ ၊သူတို့ အတွက်လည်း သုံးစရာ လမ်း မပေးထားနိုင် သေး သရွေ့ ကတော့ .. အင်း ..ပြီးတော့နှစ်တစ်ထောင် ကျိန်စာ ပေါ့ …
သို့သော်လည်း .. သို့သော်လည်း .. သူကြီးတို့ ဆီမှာလို သေနတ်နဲ့ ကျောင်းဝင်ပစ်တာ ထက် စာရင်တော့ တော် သေးလားလို့ ..ဒီလိုဘဲ စိတ်ဖြေလို်က်တော့မယ် …. :harr:
ဒီ post ဖတ်တော့ ငယ်ငယ်တုန်း က နန့်ဗွာ ဆိုတဲ့ အရူး မကို သတိရမိတယ်..ယဉ်ယဉ်လေးရူးတာပါ
အဲ တစ်ခုကတော ကား အဖြုရောင်မြင်ရင် ခဲနဲ့ လိုက်ပေါက်တတ်တာပါ…ဆဲလည်းဆဲတယ်..
ဒါပေမဲ့ သူဆဲတာ ဘယ်သူမှနားမလည်ဘူးလေ မြန်မာစကားမှမတက်ဘဲ….သူကို ခပ်လှမ်းလှမ်း ကမြင် တာနဲ့ကို အထာသိတဲ့ကားသမားတွေက ရပ်ပြီး လက်အုပ်ချီပေးရတယ်….ဒါဆိုရပြီ.ပေးသွားတယ်
သူယောကျာ်းနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက် ကကားလမ်းဖြတ်ကူးမှာကားတိုက်သေတာလေ….မျက်စိရှေ့တင်ပေါ့
အသက်က 60 လောက်ရှိပြီ..ရိုးရာဝတ်စုံ အမည်းရောင်အမြဲဝတ်တယ်….
အနော်တို့ကတော့ ဘယ်သွားသွား ရှင်လောင်းလှည့်သလို ကျည်ကာမှန်တပ် ကားတန်းရှည်ကြီးနဲ့
ဘော်ဒီကပ် တို့ နဲ့ ခရီးသွားတာ ဆိုတော့ကာ ပူစရာလိုဘူး ဦးဆာ။
ဒီ ကိစ္စကလဲ ထူးထူးဆန်းဆန်း ဖြစ်စဉ် တွေကနေ သမာရိုးကျ တစ်ခုလို ဖြစ်လာပြီ
၂၀၁၁ က JJ နဲ့ပဲ နေပြည်တော် သွားတော့ မိုင်တိုင်တော့ မေ့နေတယ် ရန်ကုန်က အသွား ၁၁၅ မိုင် မရောက်ခင် ခဲနဲ့ပေါက်ခံလိုက်ရတယ် ခဲ အရှိန် ကားအရှိန်နဲ့ ဘေးကမှန် ကြေ ပြီး ပေါက်သွားတယ် သွားရင်းနဲ့ အရှိန်ကြောင့် ပိုပို ပဲ့လာတယ် လူများ ခဲ ထိလို့ကတော့ မလွယ်ဘူး
ရဲစခန်းကို ဝင်တိုင်တယ် အခုထိတော့ မိတယ် မကြားမိဘူး
ကားပေါ်မှာပါတဲ့ ယာဉ်မယ်လေး တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းသွားတာလေးကတော့ သဘောကျစရာပဲ
ရထားတွေ အရင်တုန်းက ခဲနဲ့ အပေါက်ခံရတယ်
ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူတော့ ပျောက်သလောက်ဖြစ်သွားတယ်
ဒီ ကိစ္စမှာလဲ ပေါ်အောင် ဖော်ထုတ် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ပတ်ဝန်းကျင် ရွာတွေကိုလဲ အသိပညာပေးရင်တော့ လျော့သွားမယ် ပျောက်သွားမယ် ထင်မိတာပဲ
သူ့ထက် လက်တွေ့ ကျမှာလေး တစ်ခုလဲ စဉ်းစားမိတယ် မြန်မာပြည်နဲ့ ကိုက်ညီအောင်ပေါ့
ရွာထိပ်မှာ အမှိုတ်တွေ ပုံကြတယ် ဘယ်လိုမှ တားမရဘူး နောက်တော့ ဉာဏ်ကြီးရှင် ရွာလူကြီးက နတ်ကွန်းလေး ဆောက်လိုက်တယ် ဘယ်သူမှ အဲဒီနေရာ အမှိုက်မပုံတော့ဘူး
အခုလဲ အမြန်လမ်းဘေးမှာ နတ်ကွန်းတွေ ဆောက် နတ်ရုပ်က လမ်းဘေးက ခဲနဲ့ ပစ်လို့ မှန်ပြီးသေသွားတဲ့ လူ က နတ်ဖြစ်သွားတယ် သူ့ အရုပ်နဲ့ သူ့ နဖူးမှာ သွေးလေးတွေတောင်ပေလို့
သူက ခဲမှန် သေသွားတာမို့ ခဲနဲ့ ပေါက်တဲ့ လူတွေကို အားကြီး စိတ်ဆိုးတယ် ခဲနဲ့ ပေါက်တဲ့သူ နတ်ကိုင်ခံရမယ်လို့ သတင်းများများလွှင့် ( နတ်ကိုင်ခံရတာ ဘယ်လိုလဲလို့တော့ မမေးနဲ့နော် )
လုံးဝ မပေါက်သလောက် ဖြစ်သွားမယ် ဒီ ကြားထဲ မူးမူး ရူးရူး နဲ့ ပေါက်တဲ့ သူူများ ရှိခဲ့ရင် လက်သည်မပေါ်အောင် နဲနဲပါးပါး ဒဏ်ရာရအောင်လောက်ပဲ လုပ် နတ်ကိုင်တယ် ဟေ့ လို့ သတင်းလွှင့်လိုက် လုံးဝ (လုံးဝ) ခဲနဲ့ မပေါက်စေရတော့ဘူး
ယိုးဒယားသရဲကား ဖိုဘီးယား ၂ ကို အဲ့ ရွာဘက်မှာ ပြပလိုက်။
အာဖဂန်နစ္စတန်က အမေရိကန်တပ်တွေ အရုတ်မှာ ၂၈ဘီလျံလောက် တန်ဖိုးရှိတဲ့ စစ်ပစ္စည်းတွေ ပြန်သယ်ဖို့ ခေါင်းစားနေတယ်။ အဲဒီထဲက သံချပ်ကာကားတွေတောင်းပြီး အဝေးပြေးကားနေရာ အစားထိုးရင် မကောင်းလား…. လိုအပ်ရင် ကြေးမုံဂျီးတို့တိုင်းပြည် သိမ်းတဲ့အခါ သုံးလို့လည်းရတာပေါ့ :harr:
နေပြည်တော် အမြန်လမ်းမှာ တောသားတွေ ဂဲ နဲ့ ထုတယ် ကြားမိတယ်..
ကုန်ကားလို ကားမျိုးကို ဂဲ နဲ့ ထုတာလို့ ကြားမိတာပဲ…
ကုန်ကား ဆိုတော့ လူ သိပ်မပါဘူး.. ဂဲ နဲ့ ထုလို့ ရပ်လိုက်မိရင် လူစုနဲ့ ဝိုင်းပြီး ဓါးမြတိုက်တယ် ကြားမိတယ်။
အသိ တယောက်က light truck နဲ့ ပြန်လာတာ မိုင်တိုင်တော့ မမှတ်မိဘူး ကားမှန် ကို ဂဲ ဝင်လာတယ် နဖူးပေါက်သွားတယ်။ ၂ယောက်တည်းမို့ ကြောက်တာနဲ့ ကားမရပ်ပေးပဲ ဆက်မောင်းပြေးတယ်။ နီးစပ်ရာ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်တော့ အဲ့ဒီမှာ ဂဲပေါက် တဲ့ အမှု ဖွင့်ထားတာ ၂ခုလောက် တွေ့ခဲ့တယ်။
အရင်က ရန်ကုန်-မန်းတလေး ရထားစီးပြန်တော့ ၊ ရထားလမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာပေါ့ ၊ တစ်ပြသာသာလောက်အတွင်းမှာ လင့်စင်လေးတွေထိုးထားတဲ့ ခြံလေးတွေရှိတယ် ။ စစ်သားအစောင့်ပေါ့ဗျာ ။ မန်းတလေးအခေါ်တော့ လမ်းတစ်ပြ အတွင်း တစ်ခု ပေါ့ ။ သံလမ်းကို စောင့်ကြရတာ မှတ်တယ်
ရန်ကုန်-မန်းတလေး အမြန်လမ်းမကြီးမှာလဲ ၊ တစ်ပြ ကို ရဲတစ်ယောက်လောက် စောင့်ခိုင်းရင် ၊ စရိတ်တော်တော်ကုန်မယ်မှတ်တယ် ။
လာရောက်ဖတ်ရှုသောစာဖတ်သူများနှင် ့တစ်ကွ စဉ်းစားတွေးတောပြီးအတွေ ့အကြုံများကို
မျှဝေပေးကြသော ကိုပီချိုကြီး ၊ အန်ကယ်ကထူးဆန်း ၊ အန်ကယ်ကြီး ၊ မခိုင်ဇာ ၊ ကိုအံဇာ ၊ ကိုနိုဇိုမိ ၊ ဦးကြောင်ကြီး ၊ Traditional နှင် ့
အန်တီဆူး တို ့အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း……
ကျနော်တို ့ဆီမှာ စည်းကမ်းဆိုတာ အတော်လေးလုပ်ယူရပါဦးမယ် ။
အမြန်လမ်းမှာလည်း ရဲတစ်ယောက်တလေကို တွေ ့ပေမဲ့လုံလောက်တဲ ့အင်အား
မဟုတ်သလို ဒီလိုဆိုင်ကယ်လေးနဲ ့ပတ်နေလို ့မရပါဘူး ။ တံတားပေါ်က
မီးလုံးတချို ့တောင်ဖြုတ်ခိုးသွားတာ မျိုးတွေရှိပါတယ် ။ အနီးအပါးကလူတွေကို
ပညာလည်းပေးရင်း ဥပဒေစိုးမိုးမှုလည်းဆောင်ရွက်သင် ့ပါပြီ ။
အောက်က ကော်မန် ့တွေမှာတွေ ့ရတဲ့အတိုင်းဆို မကြာခဏဖြစ်နေပုံပါပဲ ။
ကိုယ်ပိုင်ကားများအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင် ညဖက်ခရီးမသွားသင် ့ပါဘူး ။
ကိုဆာမိရေ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း သဂျီးဆာဗာ ဘာဖြစ်နေမှန်းမသိဘူး
ကွန်မင့်ပျက်ပျက်သွားတယ်ဗျာ (နေ ့လည်က မန် ့ပြီးသားဟာကို)
ရန်ကုန်-မန်းတလေး အမြန်လမ်းမကြီး ရဲ ့လုံခြုံရေးအတွက်
ရန်ကုန်-မန်းတလေး မီးရထားသံလမ်းလိုမျိုး တစ်ပြမှာ စစ်သားတစ်ယောက်လောက် ကင်းစောင့်ခိုင်းရင် ကောင်းမယ်မှတ်တယ်
အပေါ်က မင်း ဆိုတာ ကိုပေပဲထင်ပါရဲ့။ဟုတိပါတယ်အခုပို ့စ် တွေပေါ်လိုက်မပေါ်လိုက်ဖြစ်နေတယ် ။
ကိုပေပြောသလို စစ်သား စောင် ့ခို်င်းပြန်ရင်လည်း စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပြန်ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်
မိအောင်ဖမ်း ပြစ်ဒဏ်ပေး ကျန်တဲ ့သူတွေပညာပေး
ခက်တာက သွားတိုင်ရင် ထိရောက်တဲ ့ဆောင်ရွက်မှုမရှိတာပဲ ။
ပြည်သူတွေဟာ စစ်အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၆ဝလောက် နေလာကြရတော့…
အခွင့်အရေးဆိုတာလည်း မသိခဲ့ကြပဲ တော်သလိုပဲ (ရိုင်းရို်င်းပြောရရင် ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလို့ အဓိပ္ပါယ် ပေါက်မိတယ်။) နေလာခဲ့ကြရတယ်။
အခွင့်အရေးဆိုတာကို မသိခဲ့သလို တာဝန်ဆိုတာကိုလည်း မယူခဲ့ကြရဘူး။
ဒီမိုကရေစီမှာ လူတိုင်းဟာ အခွင့်အရေးရကြမှာ ဖြစ်သလို
ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူဖို့၊ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါးကို မထိခိုက် မနစ်နာစေဖို့ အသိတရားရှိဖို့ လိုလာပြီ တဲ့။
(နားလည်သလို ပြန်ရေးပြထားတာ ဖြစ်ပါသည်။)
မြန်မာတွေ.. ဝက်သားမစားအောင်.. မွတ်ဆလင်တွေကနတ်ဖြစ်.. နတ်ကနေတဆင့် ခြောက်မှ.. မြန်မာတွေ (အနည်းဆုံး) တောင်ပြုန်းမှာ.. ဝက်ပြတ်တယ်..။
ချစ်တီးအနွယ် ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေက.. မြန်မာတွေအမဲသားမစားအောင်.. ဆရာတော်ကြီးတွေကတဆင့်ခိုင်းမှ.. နွားမေတ္တာစာကလေးလိုက်နာပြပြီး..(အနည်းဆုံး) တောနေမြန်မာအများစု နွားသားပြတ်တယ်..
လုပ်လိုက်ဟေ့… ငရဲနဲ့ခြောက်ဘုံနဲ့မြှောက် တာကြိုက်သူတို့အတွက်.. ထုံးစံအတိုင်း..
ဘီလိုပြောရမတုန်း …ကျုပ်ကျိကျိက စီချွမ်တီလုပ် ပေမယ့်
ညှီလို့ အမဲသားမစားဘူး ….
ကျုပ်ကတော့ အမဲသား ဂျွမ်းထိုးပြီးကြိုက်တယ်…
မိန်းမရရင် အမဲသားနဲ့ ကတီပါလမ်းခွဲဖြစ်တော့မယ်ထင်ပ…
ခုလေးတင် ဂယူးဒွန်း စားလာတာ …
သဂျီးကော သေရင် ဘာနတ် လုပ်မလဲ.. အခုတည်းက ရုပ်ထု လုပ်ပေးထားချင်လို့။
ကိုကြိးကျော် ထက်တော့ အဆင့်မနိမ့်စေရဘူး။ အဟိ
ဒါဆို ဒေါင်းရုပ်ကြီး ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ပေါ့..
နံကရိုင်းလိုမျိုး ဒီဇိုင်း ခပ်ဆင်ဆင် ဆွဲရမယ် ထင်တယ်။
အစ်မဆူး .. ဂဇက်နတ်ကို အရစ်များများနဲ့ ထုပေးလိုက်ပါ … ခိခိ
အခုလို.. အင်နာဂျီအတွက်တကမ္ဘာလုံးဒုက္ခများနေချိန်.. ငရဲပြည်ကမီးတတို့က.. ဘာတဲ့.. တော်တော့ကို အပူရှိတယ်.. လောင်နိုင်တယ်.. ဆိုတာပဲ..
တတို့လောက် လူ့ပြည်အိပ်စပို့လုပ်လိုက်ရင်.. ငရဲမင်းရာထူးဝယ်ပြီး.. ငြိမ့်နေလို့ရတယ်..
လောင်စာမလို.. လျှပ်စစ်မီးတွေတကမ္ဘာလုံးလင်းကုန်မှာမို့.. ကုသိုလ်လည်း… ရမှရ…။
ငယ်ငယ်က ကြည့်ခဲ့ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဦးသုမောင်ကြီး ရထားစီးရင်း ခဲပစ်ခံလိုက်ရကတည်းက ဆိုက်ကို တစ်ခု ဝင်ခဲ့တယ် ။ ရထားနဲ့သွားတဲ့ ခရီးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ခဲ့ပြီး ၊ မဖြစ်မနေ စီးရလျှင်လည်း ပြတင်းပေါက်ဘက်မထိုင်တာမျိုး ၊ တံခါးပိတ်ထားတာမျိုး လုပ်ပြီးမှ စီးလေ့ရှိပါတယ် ။ ပစ်သွားတဲ့ လူ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ မသိပဲ ဖမ်းလို့လည်း မရဘူးလို့ စိတ်ထဲ စွဲနေမိလို့ပါ ။ အခုလို ကားတွေကိုပါ ခဲနဲ့ ပေါက်တယ်ဆိုတာသိရလို့ နည်းနည်းတောင် လန့်သွားပြီ ။ ဒါပေမယ့် ညဘက်သွားတဲ့ ကားတွေကို စီးတာ များတာကြောင့် … ခဲနဲ့ပေါက်တဲ့လူတွေနဲ့ မတွေ ့ခဲ့ဖူးတာဖြစ်မယ် ။
ကားက အရှိန်နဲ့ ဖြတ်နေတဲ့အချိန် ခဲသာ စင်မိလျှင် မစားသာဘူးရယ် ။ ဒီတိုင်းဆို ခရီးသွား အာမခံလုပ်ငန်းတွေများ ခေတ်စားလေတော့မလား …
ခဲနဲ့ပေါက်သူကို တွေ့အောင်ရှာပြီး လူသိရှင်ကြားအရေးယူသင့်တာဗျာ။
အမှုမှန်ပေါ်ရင် ဂျာနယ်ထဲထည့်ပလိုက်… လူတေအကုန်သိသွားတော့
နောက်လုပ်မဲ့လူ တွန့်သွားမှာ အမှန်ဘဲ။
Our government will buy bullet proof/ bomb proof /stone proof cars because of danger on the express road(highway).